ပိုက်ဆံရှိသူ အချို့ရဲ့ ရောဂါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » ပိုက်ဆံရှိသူ အချို့ရဲ့ ရောဂါ
Posted by etone on Jun 8, 2011 in Gossip, Rumor, Short Story |9comments
ပိုက်ဆံက လူသားတွေအတွက် အရေးကြီးဆုံး မဟုတ်လျှင်တောင် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်… ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေကို သူ့လောက်မရှိတဲ့လူတွေထဲက တချို့ ကပ်ဖားတွေက ပင့်ကြတယ် မြှောက်ကြတယ်… ။ အရေးကြုံလျှင် အခွင့်ရေး အကူညီလေးများပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့ပါ… ။ တကယ်တမ်း အလကားနေရင်း ပင်မြှောက်တာတွေ လုပ်နေတာနဲ့ ကိုယ့်အတွက် တိုးတက်ရာ တိုးတတ်ကြောင်း အချိန်တွေ ကုန်ဆုံး နေခဲ့တယ်ဆိုတာ သတိမထားမိလိုက်ကြဘူး … ။ နာရီတွေကိုသာ ရပ်တန့်အောင်လုပ်လို့ ရမယ် အချိန်ကို ဘယ်သူကမှ ရပ်ပစ်လို့မရ့ပါဘူး … ။
ဖားကျွတ်လူတွေက …မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လုပ်ပေးခဲ့သမျှ တကယ်တမ်း အကူညီလိုတဲ့ အခါ တောင်းကြည့်ပါဦး … ကိုယ့်ကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိ ရှိတယ်တောင် ထင်ခံရမှာ မဟုတ်ပါဘူး …ဒါကြောင့် မလိုအပ်ပါပဲ အလကား ဖားနေတယ် လူတွေကို ကျွန်မမုန်းမိတယ်… ။ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးဆိုသလိုဖြစ်နေပါပြီ … မြှောက်ပင့်ပေးမဲ့လူတွေကလည်း ရှိတော့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူတွေ သွေးနားထင်ရောက်နေတော့တာပေါ့ … ။ မြှောက်ပင့်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်း သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေခြင်း ၊ ဦးဆောင်မှူ လုပ်စေခြင်းမျိုးပါပဲ… ။ ကြည်ညိုလွန်းလို့ ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်စေတယ် မထင်ပါနဲ့ … အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်းနေကြခြင်းပါ ။ သူ့မှာ ရှိတာ ကိုယ့်မှာ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး အတွေးတွေ မချော်နေစမ်းပါနဲ့လို့ပဲ ပြောချင်တယ် ။
ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူဆိုလျှင် ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်ပါသော်လည်း မမခေါ်ရတာက တမျိုး ၊ အကို ခေါ်ရတာ တမျိုးနဲ့ လောကွတ်တွေ လုပ်နေပါရောလား ။ ပိုက်ဆံချမ်းသာတာနဲ့ အသက်နဲ့ တခြားဆီပါ… ။ ပိုက်ဆံ ချမ်းသာတဲ့လူက အသက်ငယ်တဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ ရိုသေ ပေးခံချင်စိတ်ဘာလို့များ အချောင်ဖြစ်နေရတာပါလိမ့်… ။ လူကြား၊ သူကြားမရှောင် မျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ အသက်ရွယ် ခန့်မှန်းလွယ်တာတောင် ကိုယ့်ထက် အသက်ငယ်တဲ့ ပိုက်ဆံရှသူက ကိုယ့်အပေါ် လူကြီးတယောက်လို့ ဆက်ဆံတာ ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်မျိုးတွေနဲ့ ငြိမ်ခံနေကြပါလိမ့်… ။ ဘာအတွက်ငြိမ်ခံနေကြပါလိမ့် … တွေးရင်း နားမလည်ပါ .. ။
အန်တီအရွယ် ၊ဦးလေးအရွယ် ဘောစိများကလည်း ကိုယ့်တူ ၊တူမအရွယ် … ကိုယ့်သားသမီးအရွယ်လေးက မမ ၊ အစ်ကို စသဖြင့် ခေါ်လျှင် သဘောတွေ့ မနောခွေ့နေကြတာ ။ တကယ်ဆို အသက်ဆိုတာမျိုးက မကြီးပါနဲ့ဦး ခဏနေပါဦး စောင့်ခိုင်းထားလို့ရတာ မဟုတ်ဘူးလေ သဘာဝတရားကိုက ဘယ်သူ့ဘက်မှ မလိုက်ပဲ လာဘ်ထိုးလို့ မရပါပဲ … လည်ပတ်နေတာပါ…။ ဘာလို့များ ကိုယ့်အသက်ကို ဖုံးကွယ်ပြီး ငယ်ရွယ် နုနယ်ချင်နေရတာ လဲ စဉ်းစားစရာပါပဲ … ။ ရုပ်ကိုသာ ပို နုပိုငယ်အောင် လုပ်လို့ရမယ် …အသက်ကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ငယ်အောင် ပြန်လုပ်လို့ မရပါဘူး … ။
နောက်တစ်ခု လေ့လာမိတာက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူ တချို့က စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အထိန်းကွပ်မဲ့စွာ ပြုမူ ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်… ။ ပိုက်ဆံနဲ့ အရာရာကို ဖြေရှင်းမယ် … ဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး အထင်နဲ့ ဖြစ်မှာပါ … ၀ါးလုံးကြီးမြင်ပြီး ၀ါးခြမ်းလို့ ပြောင်ငြင်းရဲတဲ့ သတ္တိထူးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်… ။ အထူးသဖြင့် နှုတ်ဖွာ ၊ နှုတ်ကြမ်းတတ်ကြပါတယ်… ။ ရိုးရိုးပြောလည်း ဒီစကားပါပဲ ၊ ဆန်းဆန်းပြောလည်း ဒီစကားပါပဲ… ဒါကို ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားကမှ မှန်တယ်…. ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားမထွက်ပါဘူး ထင်နေလျှင်တော့ အဆံချောင်နေတဲ့ ကြက်ဥတလုံးလို အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး ။
ပိုက်ဆံရှိပြီး ဘ၀င်မြင့်နေတဲ့လူတွေ အကြောင်းကို ပို့စ်မဖတ်ကြည့်ခင်ကတည်းက သိထားပြီးဖြစ်မှာပါ … ။ ဘ၀င်မြင့်တာ ၀ါသနာပါလို့ ဆိုပြီးပြောချင်ပြောကြလိမ့်မယ်… အ ကျင့်ကတော့ဖျောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ …. ။ အလကား မစားရ အညှော်ခံ အောက်ကျို့ နေတဲ့လူမျိုးတွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် ကြောင့်ပါ ..။
ကဲကဲ …ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူတပါးအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်း ၊ အောက်ကျို့ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းများ ကင်းဝေးကြပါစေနော် ။ ။
ဒီလိုလူမျိုးတွေက “မပြည့်တဲ့အိုးဘောင်ဘင်ခတ်” ဆိုတာမျိုးလိုပေါ့ ပြည့်ပြီးတဲ့ လူတွေက ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလေ.. လောကမှာ ဒီလိုလူမျိုးတွေလဲ ၇ှိတက်ပါတယ် etone ရေ…
တုံးလေး ဘာတွေ မကျေနပ် ဖြစ်နေတာလဲဟင်..
လူ ဆိုတော့ စရိုက် အမျိုးမျိုး ရှိတာပဲ။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မတူတဲ့ အခါလည်း ရှိမှာပေါ့.. အရာရာ သည်းခံတာတော့ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ သရက်သီး အကင်း ခူးစားမှာနဲ့ သရက်သီး အမှည့် စားရတာတော့ အရသာကွာတယ်။
ညီမ တချို့ကိစ္စ ကိုယ်က အကင်းပဲ ရှိသေးတော့ စိတ်လျော့ထားရတာလည်း ရှိတတ်တယ်လေ။
နောင်တချိန် ကိုယ်လည်း သူတို့လို မဖြစ်ဖို့သာ တွေးထားလိုက်ပေါ့
မိမိကိုယ် မိမိ တန်ဘိုးထားတတ်သူများကတော့
ဘယ်သောအခါမှ ငွေရှိသူကို အောက်ကျို့မည်မဟုတ်ပါ။
အီးတုန်းရေ…….. တို့ကတော့ .. ပိုက်ဆံရှိတဲ့ သတောင့်သားသတောင့်သမီးဆို ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးကရှောင်တယ်…။ ဟိုသီချင်းလိုပဲ အနံကြီးကွင်းကျယ်ဆိုတာလေ……… မပတ်သက်အောင်လည်းနေတယ်…။ ပတ်သက်မိရင်လည်း တန်းတူဆက်ဆံရမှ… ဆက်ဆံရေး လက်ဦးမှုရယူ ပြီးမှ ဆက်ဆံတယ်…။ ရှင်းရှင်းပဲ..။
ကျွန်တော်ကလည်းတောကတတ်လာတဲ.ကောင် ရွာမှာ ကိုယ်.အလုပ်ကိုယ်လုပ်ချင်မှထလုပ်တဲ.ကောင်
အဆင်မပြေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်း ကိုယ်.ကိုစာသင်ပေးတာမဟုတ်ပဲ ဆရာမခေါ်ချင်တာရယ်
ထုတ်ရင်ထွက်မှာပေါ.ဆိုပြီးနေတယ်။အခုထိလည်းရန်ကုန်အလုပ်လုပ်လာတာ3နှစ်ရှိပြီ သူဌေး ရယ် ဆရာ
ရယ်မခေါ်ဖူးဘူး ရှေ.ဆုံးနာမည်လေးဦး တပ်ပြီးပဲခေါ်တယ်ဗျာ။
အများအားဖြင်.တော. ရန်ကုန်လူထုတွေအလုပ်မလုပ်ရသေးဘူး သူဌေး သူဌေးနဲ.တော်တော်ခေါ်ကြ
သူထေး ဆရာ ဘောစ် မခေါ်ချင်လည်း ….
ဘောစိလို့တော့ခေါ်လိုက်ပါဗျာ …… မြန်မာစာသတ်ပုံကျမ်းထဲတောင် ရောက်ချင်ရောက်တော့မှာ
Some people has this habit.
ဖင်မတဲ့ အလုပ်ကို သိပ်လုပ်ချင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့..
ရာထူးကြီးသူများကိုပါ.. အဘရယ်..(အဲဒီအဘဆိုတာ ပခုံးပေါ်မှာ ကြယ်ကြီးကြီးနဲ့) ဘာရယ်ညာရယ်ပေါ့..
ကျုပ်ဦးလေး..က ဘယ်က ဘယ်သူ.. ဘယ်လောက်ဘာဖြစ်တာ..
မစားရ၀ခမန်း.. အဲဒီ သူ့ဦးလေးက သူ့ကို ရှိမှန်းတောင်မသိဘူး..
အလကား ငကြောင်တွေ ဖော်လံဖားတွေ..
အဲဒီလို လူတွေ တစ်ကယ်ကိုရှိတာ…
ဥပမာ.. အမေရိကန်က မက်ကိန်းလာတာကိုပဲ.. တစ်ခုခုကို မျှော်လင့်နေကြတာမျိုး..
သူက သူ့နိုင်ငံအတွက် အလုပ်လုပ်တာ..
သူ့နိုင်ငံကကို အကျိုးပြုနိုင်မှ သူက ဘာလုပ်ပေးမယ်..ညာလုပ်ပေးမယ်လုပ်မှာပေါ့..
အီးတုန်း.. အီးတန်းလား.. အဲဒါမျိုးကို ပြောသာပြော..
ွှအလကားနေရင်း ဖင်လိုက်မတဲ့လူတွေ ရှိနေတော့ … ကိုယ်တွေက အေးဆေးနေတဲ့လူ ဖားလည်း မဖားတတ်တော့ .. ဖင်မတဲ့လူကပဲ လိမ်မာ ပါးနပ်ပြီး ကိုယ်က ငတုံးလိုလို ၊ သောက်သုံးမကျသလိုလိုတွေ ဖြစ်လာလွန်းလို့ တည့်တည့်ဆော်ထည့်လိုက်တာ …. ။
ဘာလို.အဲဒီလောက်ဖင်လိုက် မ ချင်နေရတာလဲ